China Wholesale Custom Logo Dhinda nekukurumidza Dry Polo Shirt vagadziri uye vanotengesa RE-HUO
Chigadzirwa Chigadzirwa: Polo
Zvinhu: 120gsm 100% polyester
Ruvara: Dema / chena / humambo / peacock bhuruu / tsvuku / yero / orenji / dhamu rebhuruu / girini
Nekuti mumatanda mavara, MOQ yedu zvidimbu zana Polo muvara rega rega, uye unogona kusarudza akawanda masize.
Iyi ndiyo saizi chati iri mudura, isu tinopawo yakasarudzika saizi masevhisi, iwe unogona kutitumira yako saizi chati kana kutitumira pahembe, mugadziri wedu anozozvigadzirisa zvinoenderana nezvaunoda.
Unogona kusarudza imwe kana nzira dzekudhinda kuita yako polo yakanyanya fashoni.
Unotumira dhizaini yako kwatiri uye isu tichaiprinta zvinoenderana nechikumbiro chako, Kana iwe usingazive maitiro ekugadzira polo dhizaini, unogona kutitumira logo yako kana zano, uye mugadziri wedu anogona kupedzisa dhizaini yako.
Isu tinopa yakasarudzika chitaridzi uye tag basa, kugadzira polo nekambani yako.
Pashure: Yepamusoro yepamusoro yepamusoro yakajeka sleeve t-shirt Yakachena Ruvara 100% donje t-shirts
Zvadaro: Wholesale inokurumidza yakaoma polyester shati yemarathon kushambadzira uye musarudzo mushandirapamwe wakagadziriswa sublimation tank pamusoro